xiisad laga dareemayo Magaalada cadaado – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
xiisad laga dareemayo Magaalada cadaado
A warsame 29 September 2017
Magaalada Cadaado ee xarun kumeel gaar u ah Galmudug ayaa xiisad ay ka jirtaa maanta iyadoo inta badan ganacsiga magaalada uu joogsaday.
Ciidamo aan cidna ka amar qaadan ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin magaalada Cadaado iyadoo ciidamada booliska ee halkaa joogana heegan buuxa la geliyay.
Xildhibaanada ka soo jeeda dowlad Goboleedka Galmudug ee baarlamaanka Federalka iyo Aqalka Sare ayaa ku kala aragti duwanaaday xiisada ka jirta Galmudug oo gaartay meel sare.
Qaar ka mid ah Xildhibaano ka tirsan barlamaanka soomaaliya ayaa shalay ka baaqday in ay gaaraan magaalada Cadaado iyadoo ay saameyn ku yeelatay wareegto uu soo saaray Madaxweynaha Galmudug oo ay sheegeen qaar kamid ah xildhibaanada Galmudug inay kalsoonida kala laabteen.
Xildhibaanada ka baaqsaday shalay inay gaaraan Cadaado ayaa ku eedeeyay xildhibaano hore u tegey Cadaado inay dhedhexaadiyaan madaxda sare ee Galmudug inay ka dambeeyaan joojinta diyaaradahii tegayay Cadaado.
“Joojinta duulimaadyada Cadaado waa mid ay ka dambeeyaan xildhibaanadii u tegey Cadaado inay dhexdhexaadiyaan madaxda sare ee Galmudug.”ayuu yiri mid ka mid ahayd illaa lix xildhibaan oo shalay dib uga laabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Xildhibaanadan ayaa waxa ay ugu baaqeen oday dhaqameedyada iyo waxgaradka Galmudug in u istaagaan sidii xal loogaga gaari lahaa arrinta ka jirta Galmudug.
Sidoo kale Xildhibaanadii iyo Senataradii waan waanta u tagay Cadaado ayaa sheegay inay ku fashilmeen wada hadaladii ay ka dhex wadeen Madaxweynaha, Madaxweyne kuxigeenka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka, waxaana ay ku eedeeyeen Madaxtooyada inay faragelin ku heyso Maamulka Galmudug.
Sidoo kale waxaa ay ku eedeeyeen mid ka mid ah Musharaxiintii u tartantay xilka Madaxweynaha inuu magaalada ka wado qas iyo fowdo, waxaana la sheegay inuu ku lug lahaa abaabulka kulankii Xildhibaano ka tirsan Galmudug ay xilka uga qaadeen Madaxweyne Xaaf.
Wararka qaar ayaa sheegaya in siyaasiga Axmed Shariif oo maalmo ka hor tagay Cadaado uu ku xiran yahay xubno ka tirsan dowladda Federaalka, oo doonaya inay meesha ka saaraan Mr Xaaf.
Tan iyo markii khilaafka Khaliijka uu soo baxay, ayaa waxaa uu saameyn ku yeeshay nidaamka Federaalka ee Soomaaliya, kaddib markii maamul goboleedyada ay bilaabeen inay ka soo horjeestaan go’aankii dhex dhexaadnimada ay dowladda Federaalka ka qaadatay xiisada Khaliijka.